La Yaabka aduunka: Daawo aroos ay ka soo qayb galeen lo’o kaliya – SBC
La Yaabka aduunka: Daawo aroos ay ka soo qayb galeen lo’o kaliya
Posted by editor on Noofember 30, 2011 Comments
In aduunka qoloba wixii la wanaagsanaada ay ku dhaqaaqdo qolona qalad iyo qalooc uu la noqdo shaki iyo dood kama taagna, waana halka ay Soomaali ka tiri Nin wax la toosanbaa nin la tuur leh).
Hadaba ma halagaa sheegaa mise waa magac & maamuus raadis mise waaba waali & madax wareer nin lagu magacaabo Michael Hanson,& Hayley Morgan ayaa dunida ku dhaqaaqay talaabo aan horey loo arag ka dib markii ay go’aansadeen in arooskoodu uu ka duwanaando aroosyada caadiyan dhaca isla markaana aanay ka soo qayb galin bini’aadam oo xoolaha gaar ahaan lo’o ay ka soo qayb gasho arooskooda.
Michael oo 26 ayaa guuradey Hayley Morgan oo 31 ayaa markii ay nikaaxa ku sameystey kaniisad ku taal deegaanka ay degan yihiin waxay soo abaareen beer ay lahaayeen iyagoo halkaasi kula dabaaldegay raxan lo’o ah oo isagu jirta dibbi & sac.
Nikaaxan oo ka dhacay deegaan beeraley ah oo ka tirsan magaalada Eardisland, Herefordshire ee wadanka Ingiriiska ayaa caruusku wuxuu ugu tagey qoyska xaaskiisa cagaf cagfta beeraha lagu qodo, isagoo taasi ula jeeday in uu ku lamaaniyo arooskiisa dhaqanka beeraleynimada ee uu leeyahay.
Dad badan oo isku dayey inay lamaanaha goobta ay isku mehersadeen ka raacaan goobta nixaaka ayaa halkaasi isaga tagey ka dib markii lamaahana is mehersadey ay sheegeen in xaflada inta ka dhiman ay kula qaadanayaan beertooda Lo’da ay leeyihin oo aysan dooneyn inay bini’aadam kale goobtaasi ku sugnaadaan.
SBC Stockholm, Sweden